न्यायाधीश Archives - Lokpati.com
Tag - न्यायाधीश
ओलीको प्रश्न : जनता जोक्समै रमाउँछन् त मेरो के दोष ?
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मान्छे हसाउने जोकर भन्दै नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गरेका छन्। प्रदेश नम्बर १ का कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्रीले आफूले राम्रो काम गरेर जनतालाई खुशी पार्दा...
संविधान बनाउनेहरुले त्यो पढे कि पढेनन् थाहा छैन। तर संविधान मान्नेहरुले संविधान पढ्नैपर्छ। संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ता लिनुपर्छ।
युवा विद्यार्थीहरुले माइतीघर मन्डलामा संविधानको पाठ गरिरहेको देख्छु। हुन त...
न्यायाधीश यादवले दिए पदबाट राजीनामा
काठमाडौं, ८ भदौ। मदिरा उत्पादक तथा बितरक कम्पनी गोर्खा बु्रअरीलाई कर छुटको आदेश जारी गरेको विषयमा छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत पोखराका अर्का न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिएका छन्। कर छुट प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा काजमा...
३३ केजी सुन प्रकरण : न्यायाधीशले बुझाए प्रस्टीकरण
१५ असार २०७६, आईतवार
काठमाडौं, १५ असार । ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत विराटनगरका तीन न्यायाधीशले न्यायपरिषद्ममा प्रस्टीकरण बुझाएका छन्।
उच्च अदालतका न्यायाधीश थीरबहादुर कार्की, साधुराम सापकोटा र उमेश सिंहले...
सर्वोच्च अदालतले दियाे उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशलाई वैधता
काठमाडौं, २९ चैत । उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तिका विरुद्धमा दुई वर्षअघि परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । रिटको खारेजसँगै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा...
नेताका मान्छे मात्रै न्यायाधीशका लागि याेग्य हुन् ? : शम्भू थापा
काठमाडौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले न्यायालयलाई खेलौना बनाउन खोजिएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका लागि पाँच जना न्यायाधीशहरुको सिफारिसको विषयलाई लिएर उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो सिफारिसले...
अन्तर्राष्ट्रिय • विज्ञान-प्रविधि
अब रोबर्टले फैसला गर्ने, न्यायाधीशको काम के ?
काठमाडौं। आधुनिक समाजको विश्वासको भरोसा केन्द्र मानिने अदालतमा अब रोबोटले फैसला सुनाउने भएको छ।
युरोपीयन मुलुक एस्टोनियामा तयार पारिएको रोबो जजले अदालतका मुद्दा फैसला गर्ने भएको हो। यो समाचारलाई निकै रोचकताका साथ हेरिएको...